Jailbreak "inenge izere" kuWOSOS, ikozvino | Ndinobva mac
Jailbreak "inenge yakwana" kuWOSOS, ikozvino
Kunyangwe isisiri musoro wenyaya uri pamiromo yemunhu wese nekuda kweshanduko isingaverengeke iyo, vhezheni mushure mechinyorwa, yega yega vhezheni nyowani dzeIOS dzinosanganisira, iyo jailbreak inoita kunge yarasikirwa neimwe pfungwa muiyo iPhone kunyangwe kuchine vateveri veapuro avo vanoda kuve nehurongwa zvakanyanya kuda kwavo.
Nekudaro, kana isu tichifunga nezve Apple Watch, hazvisi kusvika izvozvi, neiyo Apple Watch Series 3 modhi uye iyo vhezheni yeiyo watchOS 4.1 system iyo vamwe vanogadzira vakakwanisa kugadzira iyo jailbreak kune iyi vhezheni ye "inenge yakazara" smart wachi system.
Kunyangwe semushandisi weApple Watch kubvira payakatengeswa mushanduro yayo yekutanga, kubiridzira iyo system haina kumbobvira yapfuura nepfungwa dzangu, kune vazhinji vashandisi, kunyanya vanogadzira uye vanhu vane zvimwe zvinonetsa. Ivo vanga vachifarira jailbreaking watchOS.
Mune ino kesi, mugadziri Thimstar anga ari mutariri wekutora matanho ekutanga mune ino jeri, nekuti izvozvi hazvina kukwana zvaunogona kuona mu GitHub. Kana isu tichitaura nezve "ingangoita yakakwana" kuputsika kwejeri, zvinoreva izvo zvirokwazvo kubva kune rimwe dambudziko kana uchiisa uye wachi inogona kusashanda mushe kana iwe watangazve. Ndosaka kana iwe usina chokwadi zvachose kana uchitya kusiya yako Apple Watch isina basa, zvirinani kuti usapinda mune iyi vhezheni yejasbreak.
Pakati pezviito zvinogona kuitwa paApple Watch ne jailbroken maitiro Tine:
Famba iyo kernel uchishandisa v0rtex.
Inobvumira kuverenga nekunyora kwemafaira kubva ku mudzi.
Wedzera iyo bootstrap.tar package
Inobvumira kupinda kune mudzi.
Inofanira kusimbiswa kuti inoshanda chete paApple Watch Series 3 uye neiyo watchOS vhezheni 4.1. Zvikasadaro, haigone kuurayiwa. Ndisati ndapedza chinyorwa ichi, ndinoda kuziva maonero ako maererano nekupaza jeri wachi yakaita seyaApple. Izvi zviito zvinoruramiswa neimwe nzira here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Jailbreak "inenge yakwana" kuWOSOS, ikozvino
Nyowani patent yeMac inoenderana nemasaini uye kuona kumeso
IGTV ye Instagram yave kuwanikwa paMac App Store